Nuxurka Khudbad Madaxweyne Farmaajo Ka Jeediyey Shirka Midawga Afrika Ee Ka Furmay Magaalada Addis Ababa
(Hadhwanaagnews) Sunday, February 10, 2019 17:22:43
Addis Ababa(HWN):-Madaxweynaha dawlada federaalka ah ee soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa khudbad ka jeediyey shirkii midawga Afrika ee maanta ka furmay wadanka Itoobiya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa khudbada uu jeediyey waxay u dhignayd sidan.
Mudane Dr. Abiy Axmed, Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Dimuqraadiga ah ee Itoobiya,
Ii oggolaada inaan Madaxweyne Paul Kagame si mug leh ugaga mahadceliyo hoggaamintii heerka sarreysay ee uu sannadkii la soo dhaafay ku soo maamulay
Midowgeenna. Waxaan isna soo dhawaynayaa Mudane Cabdil Fataax El-sisi, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar oo ah Guddoomiyaha cusub ee Midowga Afrika, waxaana u rajaynayaa guul.
Sidoo kale, aan walaalkay Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed, Dowladda iyo shacabka Itoobiya uga mahadceliyo martisoorka diirran ee aniga iyo wafdigayga naloo fidiyay muddadii aanu ku sugnayn magaaladan taariikhiga ah ee qurxoon, Addis Ababa.
Sharaf bay ii tahay inaan qayb ka ahaado munaasabaddan kalfadhiga 32aad ee Shir Madaxeedka Midowga Afrika, iyada oo cinwaankiisu yahay "Qaxootiga, Barakacayaasha Gudaha iyo kuwa Dibedda ka soo laabanaya ee Afrika."
Baahi weyn ayaa loo qabaa dardargelinta dhismaha hay'ad gargaarka ka shaqaysa si xal xal waara oo casri ah loogu helo qaxootiga iyo kuwa ugu nugul shacabkeenna. Baahi weyn ayaa sidoo kale loo qabaa in qaxootiga la siiyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa, xaqa lahaanshiyaha dhulka, iyo inay shaqo raadsadaan, ganacsiyo furtaan, fursad u helaan adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka, loona fududeeyo helidda dhammaan waraaqaha iyo sharciyada lagama maarmaanka ah, si qaxootiga loogu suurtageliyo in ay horumar sameeyaan, si sharaf lehna ugu dhex noolaadaan dalalka iyo bulshooyinka martigeliyay.
Soomaaliyana waxa ka go'an inay dadaal geliso gaarista hiigsigan.